प्रडक्ट इन्फो Archives - Page 22 of 26 - Living with ICT
Home / प्रडक्ट इन्फो (page 22)
वर्ल्डलिंकको इन्टरनेट चलाउनुस; टिभी र टेलिफोन सुविधा पाउनुस
काठमाडौ। के तपाइ वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनको इन्टरनेट सेवा लिने सोचिरहनु भएको छ? यदि छ यस्तो हो भने अब इन्टरनेट प्रयोगकर्ता तपाईहरूलार्इ एउटा खुशीको खबर छ। इन्टरनेट सेवा लिएवापत त्यसैमा तपाइले टिभी र टेलिफोन उपभोग गर्ने सुविधा समेत पाउनुहुनेछ। किनकी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले जिपिओएन प्रविधिमा आधारित ‘फाइबर टु दी होम’ सेवा सुरु गरिसकेको छ। यो सेवा अन्तर्गत सेवाग्राहीले मल्टिपल …
एप्पलको आइफोन ४ इन्चबाट ६ इन्च भएर आउदै
Mar 30, 2014	0
एजेन्सी। आइफोनको मामलामा सबैभन्दा अगाडी रहेको अमेरिकी चर्चित ब्राण्ड एप्पलले आगामी सेप्टेम्बरमा बजारमा ल्याउन लागेको आइफोन ६ इन्च ठूलो स्त्रिनमा ल्याउने भएको छ। हाल ४ इन्च मात्रै स्त्रिन रहेको आइफोन ५ एस र ५ सीलाई अपग्रेड गर्दै एप्पलले आइफोन ठूलो स्त्रिनको स्मार्टफोन प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा ल्याउन लागेको हो। एसियाको विकसित देश जापानबाट प्रकाशित म्याकफ्यान म्यागेजिनले हालै आइफोन ६ को स्केच सार्वजनिक …
साममुङ ग्यालेक्सी एस ५ सार्वजनिक;जसले तपाईको मुटुको गति मापन गर्छ!
एजेन्सी। स्मार्टफोनमा एपलपछि अहिलेको सर्वाधिक रुचाइएको दक्षिण कोरियाली कम्पनी सामसुङले ग्यालेक्सी एस ५ (SAMSUNG S5) सार्वजनिक गरेको छ। सामसुङ एक ४ को अपार सफलतापछि स्पेनको बार्सिलोनास्थित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेसको हलमा एक भव्य कार्यक्रम गरेर सामसुङका सीईओ जेके शिनले सामसुङ स्मार्टफोनको नयाँ रेन्ज सार्वजनिक गरेका थिए। अहिलेसम्म सामसुङले करीब २० करोड ग्यालेक्सी एस स्मार्टफोनहरु बिक्री गरिसकेका छन।आईफोनको ५ एसमा जस्तै फिंगरप्रिन्ट …
स्मार्टफोनको विकसित फिचर चलाउन अब नयाँ र सस्तो चिप आयो
स्मार्टफोनलाई अझ सजलो बनाउन वा भनौ तपाईको खल्तीमै अटाउने गरी सस्तो र भर्पर्दो डिभाइस ल्याएको छ। आर्म (ARM )कम्पनीले स्मार्टफोनको लागि उक्त सस्तो र भर्पर्दो डिभाइस चिपमा ल्याएको जनाएको छ। जुन अहिलेको सबै आइफोन र ट्यावलेट कम्पनीहरुले यो प्रोसेसरलाई उच्च प्राथमिकताका साथ भित्र्याइसकेका छन। सार्वजनिक गरिएको नयाँ चिप आर्म कर्टेक्स ए १७ सन २०१४ को अनुसार डिजाइन गरीएको छ। यसका …
नेपालका उत्कृष्ट ११ अनलाइन सपिङ साइटहरु
Jan 28, 2014	2
दिनानुदिन सूचना प्रविधीको विकास र विस्तारसँगै मानवीय जीवन शैली पनि परिवर्तन हुँदै गएको देख्न सकिन्छ। पहिला पहिला हाम्रो आमा-बुवाहरु शपिङको लागि पैदल एक दिनको बाटो हिडेर जाने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरुले आफ्नो दैनिक जीवन गुजारा गर्न आफ्नै शैलीमा शपिङ गर्नुहुनुथ्यो। त्यही शपिङ गर्ने शैली अहिले आएर विकास र विस्तार हुँदै अनलाइनबाटै शपिङ गर्नेसम्मको जमाना विश्वसँगै नेपाली बजारमा समेत आइसक्यो। अब राजधानी काठमाडौमै …
१८ हजारमा सामसङ एस डुओस २
सामसङ मोबाइलको लागि नेपालको आधिकारीक वितरक इन्टरनेसनल मार्केटिङ सर्भिस (आइएमएस) ले हालै दुईवटा सिमकार्ड राख्न मिल्ने सुविधायुक्त ग्यालेक्सी एस डुओस २ स्मार्ट फोन बजारमा ल्याएको छ। डुअल सिमकार्ड युक्त सामसङ स्मार्टफोनले प्रयोगकर्तालाई एउटै मोबाइलमा दुई वटा फोनसेटको सुविधा दिने छ। ग्यालेक्सी एस डुओस २ मा रहेको अल्ट्रा फास्ट १.२ गिगाहर्ज डुअलकोर प्रोसेसरका कारण मल्टि टास्किङ सजिलै गर्न सकिनेछ। ४ इन्च चौडा …
मल्टिमोड मिनी अल्ट्राबुक सहित लेनेभोका दर्जन ल्यापटप नेपाली बजारमा
Dec 26, 2013	1
नेपालको लागि लेनेभोको आधिकारिक डिस्ट्रिव्युटर्स मेगाटेकले लिेनेभो ब्राण्डका विभिन्न नया ल्याटप र ट्याब्लेटहरु बजारमा ल्याएको छ । यस अन्र्तगत नेपाली बजार मूल्य १ लाख ५५ हजार पर्ने YOGA11S र ९१ हजार १ सय ११ नेपाली बजार मूल्य रहेका G400S Touch गरी विभिन्न ९ नया प्रडक्टहरु ल्याएको छ । यि प्रडक्टहरु मेगाटेकले पुस १८ गतेदेखि आयोजना भइरहेको क्यान इन्फोटेक २०१४ …
दसैंतिहारमा एसरको एस्पाइरिङ सेलिब्रेशन अफर
नेपालको लागि एसरको आधिकारिक बिक्रेता मर्केन्टाइल अफिस सिस्टमले नेपालीहरुको चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै कन्जुमर प्रमोश्नल स्किमको रुपमा एसर एस्पाइरिङ सेलिब्रेशन अफर ल्याएको छ । सो स्किममा अब ग्राहकले एसरका प्रडक्ट किन्दा गिफ्ट, १० हजारसम्म क्यास डिस्काउन्टका साथै लक्की ड्र मार्फत एक लाख रुपियाँ बम्पर उपहार पाउन सक्नेछन् । कम्पनीलेले यो अफरबाट ग्राहकहरु लाभान्वित हुने विश्वास राखेको छ ।
आईएमईले ल्यायो दसैंमा SLC योजना
नेपालको अग्रणि मनी ट्रान्सफर कम्पनी आईएमईले ग्राहकलाई आकर्षण गर्ने क्रममा ‘दसैंमा SLC’ (स्मार्टफोन, एलईडी टिभी र कार) योजना ल्याएको छ । यो योजनामा सहभागी हुनेले अतिरिक्त शुल्क नतिरी विभिन्न उपहार प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो योजनामा दैनिक रुपमा लक्की ड्र गरि सेवाग्राही मध्येबाट एकजनाले SMARTPHONE (SAMSUNG G STAR) साप्ताहिक रुपमा साताभरिका सेवाग्राहि मध्ये लक्की ड्र गरि एकजनाले र LED …
क्यासपरस्कीका नया एन्टीभाइरस र सेक्युरिटी प्रडक्ट बजारमा
Aug 10, 2013	0
एन्टिभाइरसको क्षेत्रमा लोकप्रिय रहेको क्यासपरस्कीको नँया भर्सन क्यासपरस्की एन्टिभाइरस २०१४ र क्यासपरस्की इन्टरनेट सेक्युरिटी २०१४ नेपाली बजारमा आएको छ । क्यासपरस्की ल्याबको आधिकारिक विक्रेता सागर सफ्टवेयर एण्ड ट्रेडर्सले शुक्रवार एक कार्यक्रमका विच यसलाई सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनिका अनसार प्रयोगकर्ताहरुको कम्प्यूटर, महत्वपूर्ण डिजिटल सम्पत्ति तथा अनलाइन आर्थिक कारोबारहरुमा उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि नयाँ संस्करणमा नयाँ प्रविधि थपिएको …